Xplora X5 Play, nyocha, uru na ọnụ ahịa nke smartwatch maka ụmụaka | Androidsis
X5 Play, nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa
Taa, anyị nwere na Androidsis ngwaahịa nke na -achọsi ike n'oge na -adịbeghị anya. A smartwatch zuru oke yana uru dị larịị. Mana na nke a, ezubere ya maka ndị na -ege ntị. Anyị enweela ike nwalee ule ahụ Xplora X5 Play, smartwatch kacha mma maka ụmụaka n'ahịa, anyị na -agwa gị nkọwa niile.
Teknụzụ ọhụrụ, na mbụ, ọ bụ maka ndị okenye na -ege ntị, na ọbụna "ghọtara". Nnukwu onyinye a na -enye n'ahịa emeela ka ọ dịkwuo mfe ịnweta ya. Y ọbịbịa nke wearables Ha emeela ka anyị nwee ike iyi ya. ya ọnụ ọgụgụ ojiji na ngwa eme ka ụdị ngwaọrụ ndị ahụ nwee ezi uche.
1 Egwuregwu X5, smartwatch maka ụmụaka na -abụghị ihe egwuregwu ụmụaka
2 Kere na ụdị nke egwuregwu X5
3 X5 Play batrị na nkọwa ya
4 Gịnị kpatara na ọ bụ ngwa kacha mma maka ụmụ gị?
Egwuregwu X5, smartwatch maka ụmụaka na -abụghị ihe egwuregwu ụmụaka
Mgbe anyị na-ekwu maka ngwaọrụ maka ụmụaka, dị ka iwu n'ozuzu, anyị na-ezo aka na ngwaọrụ dị n'etiti etiti. Mere na ihe nke obere pụtara mma. Na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọ bụla “ngwaọrụ” teknụzụ nke ezubere maka ụmụaka na -adịkarị nso ihe egwuregwu ụmụaka karịa ihe ọzọ. Ma Nke a abụghị ikpeỌ bụ ezie na ebumnuche egwuregwu X5 bụ maka ụmụaka, ezigbo onye ọrụ bụ okenye.
E wezụga smartwatch mbụ maka ụmụaka, nke ọ bụ, a tụrụ ime egwuregwu X5, na -ekwu okwu sara mbara yana yana ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ, dị ka ngwa ọrụ nne na nna na -ama mgbe niile ebe ụmụ ha nọ. Yabụ, na agbanyeghị na ọnụahịa ya karịrị nkezi maka ngwa ụmụaka, ọ na -atọ ụtọ nke ukwuu maka ndị na -akwụkarị ha ụgwọ. Ị nwere ike ijide ya ugbu a Xplora X5 Gwuo na Amazon.
Kere na ụdị nke egwuregwu X5
Nhazi nke ngwaọrụ ezubere maka ndị na -ege ụmụaka ọ dị mkpa n'ezie ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ maa mma ma ha chọọ iyi ya. Mana ibido, anyị ga -ekwu maka nkọwa ole na ole maka nghọta anyị, adịghị mma. Nke mbụ bụ na el ọdịdị dị mma karịa ka anyị nwere ike ịtụ anya ya, eriri roba ojii na obere mmetụ agba gburugburu ọpịpị.
Nkọwa ọzọ anyị chọpụtara na ọ dị njọ bụ nha nke smartwatch. Ọ dị mma n'ezie maka iji ụmụaka. Ọtụtụ ndị ọzọ ibu na oke ọbụlagodi ọtụtụ ngwaọrụ ezubere maka ndị okenye. Na nkwojiaka nwatakịrị, oke ya na -adị oke egwu ọ dịghịkwa ihe na -ahụghị.
Naanị na -ele akụkụ ahụ anya, anyị na -ahụ a Ịkpọ oku okirikiri nwere nha ihuenyo 1,4 sentimita na mkpebi nke Pikselụ 240 x 240. Ọ na -adị mma na -echebe site n'ọnụ ya nwere plastik siri ike. Anyị nwere ike ịhụ ihuenyo zuru oke yana ihe niile dị na ya doro anya ọbụlagodi n'anwu anwụ.
Otu n'ime ihe na -eme ka ọ pụọ iche na asọmpi ndị ọzọ bụ na n'ihu ya, Xplora X5 Play, gunyere igwefoto 2 Mpx. Ihe na na -eme ka ọ pụọ iche na nke ahụ na -enye onye ọrụ (nwa) na nne na nna, ego nchekwa n'oge ọ bụla. Nwa ahụ nwere ike see foto ya na elekere n'onwe ya, ma ọ bụ onye nkuzi ọ bụla dị anya site na ngwa si na ekwentị.
Zụrụ Xplora X5 Gwuo na Amazon
Akụkụ ahụ niile nke ngwaọrụ ahụ, dịkwa ka ezi uche dị na ya, na -eburu n'uche ndị na -ege ya ntị bụ fmee plastik. Materials ukwuu ujo na ọkọ na -eguzogide nkwa ahụ iguzogide oke frenetic nke onye kacha nta n'ụlọ ahụ.
N'akụkụ aka ekpe ya bụ Oghere kaadị SIM.
N'akụkụ aka nri anyị na -ahụ a bọtịnụ aka na ọkà okwu na igwe okwu maka oku.
X5 Play batrị na nkọwa ya
Ngalaba batrị na -enye anyị data na -emegiderịta. Anyị chọtara a ụgwọ batrị dị oke elu maka smartwatch, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na ụdị ndị ọzọ anyị nwere ike nwalee. Mana ike dị elu nke akụrụngwa akụrụngwa na -eme lNnwere onwe nke ọ na -enye anaghị eju afọ ma ọlị.
N'ihi ya, anyị na -ahụ a 800 mAh batrị, nke na -eji ngwaọrụ "nkịtị" yana arụ ọrụ ya niile na -arụ ọrụ, na -enye a nnwere onwe nke naanị otu ụbọchị. Nnwere onwe nke ahụ Ọ na-agbatị ruo ụbọchị abụọ ọzọ ma ọ bụrụ na anyị gbanyụọ GPS wee mee ka ọnọdụ kwụ ọtọ rụọ ọrụ, ihe na -enweghị isi ...
Ka software gị wee gafee Android os, guo na otu njikwa mara n'etiti wearables dị ka Omuma 8909W. Ọrụ ya ziri ezi n'oge niile yana ọ na -akpa agwa nke ọma na arụmọrụ ọ bụla. Ọ nwere Ike nchekwa 4GB.
Gịnị kpatara na ọ bụ ngwa kacha mma maka ụmụ gị?
Anyị na -agwa gị na X5 Play bụ smartwatch kachasị mma n'ahịa. Na ekele maka uru ọ na -enye, ọ na -aghọ ezigbo ngwá ọrụ iji nye ndị nne na nna nchebe ọzọ ha chọrọ. Anyị na -ekwu maka mkpa ọ dị inwe geolocator na GPS Nke ahụ ga -eme ka anyị mara nke ọma na oge niile ebe nwata dị. Ị nwere ike zụta ugbu a Xplora X5 Gwuo na Amazon na ọnụahịa kacha mma.
A na -emebe nchekwa nke sistemụ GPS na -ekwe omume ojiji data mkpanaka ebe ọ bụ na egwuregwu X5 nwekwara enwere ike itinye kaadị SIM. Na ngwa n'onwe ya anyị nwedịrị ike ịtọ ntọala nche na ịhazi ọkwa ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ pụọ na mpaghara ahọpụtara.
Anyị ga -amarakwa na ekele maka ohere iji kaadị SIM, elekere nwere ike rụọ ọrụ nke ọma na -enweghị mkpa maka smartphone ịkpọ ma ọ bụ nata oku. O nwere 3G na 4G mkpuchi. Anyị nwekwara ike tinye n'ime elekere a akwụkwọ ndekọ aha ruru 50 kọntaktị.
Nlereanya X5 Gwuo
Ihuenyo 1.4 sentimita
Mkpebi 240 x 240
Nhazi Omuma 8909W
Usoro njikwa Android os
Nchekwa 4 GB
Nguzogide mmiri / uzuzu Asambodo IP68
Igwefoto foto 2 Mpx
Oghere SIM SI
Njikọ 3G na 4G
Batrị 800 mAh
Onwe ya N'etiti 1 na 3 ụbọchị (dị ka ojiji)
Akụkụ X x 16.21 9.91 7.01 cm
Ibu ibu 60 grams
Ahịa 159 euro
Linkzụta njikọ Xplora X5 Gwuo
Ọnọdụ ngwaọrụ site na iji teknụzụ GPS.
Ekwe omume nke iji SIM ịkpọ na / ma ọ bụ nata oku.
Igwefoto foto agbakwunyere n'ihu maka iji ya eme ihe.
Ibu oke maka profaịlụ onye ọrụ nke emere ya.
Nnwere onwe dara ogbenye nyere nha na ụgwọ batrị.
Ọnụahịa dị elu karịa nkezi.
Xplora X5 Gwuo
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » X5 Play, nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa
Oke ara na obodo na -eme ncheta afọ nke abụọ ya